Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! मंगलबारका मुख्य समाचारहरु : राति १२ बजेदेखि स्मार्ट लकडाउनदेखि नेप्से उच्च अंकले वृद्धिसम्म
मंगलबारका मुख्य समाचारहरु : राति १२ बजेदेखि स्मार्ट लकडाउनदेखि नेप्से उच्च अंकले वृद्धिसम्म
ग्लोबल संवाददाता मंगलबार, पुस २७, २०७८
काठमाडौं । मंगलबार दिनभरिका मुख्य घटनाक्रम समेटेर तयार पारेको प्याकेज समाचार । यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि समिटिएका छन् । आज मंगलबार राति १२ बजेदेखि स्मार्ट लकडाउन, कोरोना संक्रमणको संख्या फेरि बढ्न थाल्यो, प्रदेश २ को राजधानी र नामका लागि पुन: मतदान,नेप्से परिसूचक उच्च अंकले वृद्धि, एपीएफको लगातार दोस्रो जित,ओमिक्रोनको सामना गर्ने इजरायली रणनीति लगायत समाचार समेटेका छौं ।
काठमाडौं उपत्यकामा आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी सरकारले स्मार्ट लकडाउन लगाएको छ । उपत्यकामा कोरोना संक्रमणबढेसंगै मंगलबार तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले स्मार्ट लकडाउनु सहित ​ कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । सुचनाजारी गर्दै सीसीएमसीसी र गृह मन्त्रालयको सर्कुलर अनुसार आर्थिक गतिविधि र आवागमन नरोक्ने गरी स्मार्ट लकडाउन कार्यविधिअनुसार आदेश जारी गरिएको हो । सूचनाअनुसार सार्वजनिक स्थलमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य गराउन उल्लेख गरिएको छ । यस्तै भीडभाड तथा राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउने, सार्वजनिक ठाउँमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने, सार्वजनिक स्थलमा जाँदा माघ ७ देखि खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने, माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द गर्ने लगायत निर्णय भएको छ । निर्णयलाई ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि लागू गरिएको छ । स्मार्ट लकडाउनको सूचना आज मध्यराति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ ।
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ । एकै दिनमा २४ सय ४४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । २४ घण्टामा १५ हजार ३३ जनाको कोरोना नमुना परिक्षण गर्दा २४ सय ४४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यस्तै २४ घण्टामा कोरोना निको हुनेको संख्या ३१३ रहेको छ । यो संख्या नेपालमा कोरोना संक्रमण निको हुनेको दर ८ लाख १४ हजार ७५८ अर्थात ९७.५ प्रतिशत रहेको छ । एक जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । ९ हजार ५२२ सक्रिय संक्रमितको संख्या रहेको छ ।
प्रदेश २ को नामकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पुनः मतदानमै लैजाने दलहरुबीच सहमति भएको छ । दलहरुबीच मतदानका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजाने सहमतिसँगै प्रदेशसभाको बैठक आगामी माघ २ गते बस्ने भएको छ । बैठकमा विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यबाट नाम र राजधानीका लागि आएका प्रस्ताव टेबल गर्ने र माघ ३ गते मतदान गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धी आएका फरक–फरक प्रस्तावमा सहमति जुटाउनका लागि प्रदेशसभाले सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय प्रदेशको नामकरण र राजधानीसम्बन्धी विशेष अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले विभिन्न चरणमा गरेको छलफल तथा राजनीतिक नेतासँग गरेको बैठकमा सहमति जुटाउन नसकेपछि पुनः मतदानद्वारा नै ती प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अंकले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्सेमा ४९.१९ अंकले वृद्धि भई दुई हजार ८३४.१३ मा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ६.३४ अंकले बढेर ५२८.८७ मा पुगेको छ । कारोबार भएकामध्ये आज १७० कम्पनीको शेयर उकालो लागेको छ भने १९ कम्पनीको शेयर ओरालो लाग्दा एक कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने कुनै उतारचढाव आएन । कूल एक करोड १९ लाख ७० हजार २१५ कित्ता शेयर रु ६ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख २६ हजार १९७ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । मंगलबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ४० खर्ब तीन अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४२ हजार २७ बराबर पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा आज पनि अपि पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ । सो कम्पनीको रु १६ करोड ८३ लाख २२ हजार ६९५ बराबरको कारोबार भयो ।
अविनाश बोहरा र लोकेश बमको उत्कृष्ट प्रदर्शनप्रेरित एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री (पीएम) कप टी–२० पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । मंगलबार टियु क्रिकेट मैदानमा एपीएफले बागमती प्रदेशलाई सात विकेटले पराजित गर्‍यो । बागमतीले दिएको १२६ रनको लक्ष्य एपीएफले १८ ओभर ४ बलमा तीन विकेट गुमाएर भेट्टाएको छ । एपीएफको जितमा लोकेशले सर्वाधिक ५० रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले । लोकेशले २४ बलमा १० चौका र एक छक्का प्रहार गरे । ओपनर प्रदीप ऐरी ३६ र सन्दीप जोरा १५ रनमा अविजित रहँदा आसिफ शेखले १२ रनको योगदान दिए । बागमतीका रामनरेश गिरी, रिजन ढकाल र प्रतिशत जिसीले एकरएक विकेट लिए । यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको बागमतीले निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै १२५ रनको योगफल तयार गरेको थियो । बागमतीका ओपनर ईशान पाण्डेले २९ रन बनाए । यस्तै सुभाषले २१ रन जोडे भने नन्दन यादवले २४ र आदिल खानले १८ रनको योगदान गरे । सोमबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा दुवै टोलीको यो दोस्रो खेल हो । पहिलो खेलमा बागमतीले लुम्बिनी प्रदेशलाई ४९ र एपीएफले प्रदेश २ लाई २४ रनले पराजित गरेको थियो । जितसँगै दुई खेलबाट चार अंक जोडेको एपीएफ समूह ‘बी’ को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । दुई खेलबाट दुई अंक जोडेको बागमती तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ ।
विशेष गरी इजरायलले कोभिड–१९ विरूद्धको खोपको तीव्र अभियान सञ्चालन गर्न सक्नु र तेस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने वा नपर्नेबारे बृहत् अनुसन्धान हुनुभन्दा पहिले ‘बुस्टर डोज’ वा तेस्रो खोप प्रस्ताव गर्ने प्रारम्भिक निर्णयका लागि कोरोनाभाइरस महामारीप्रति इजरायलको प्रतिक्रिया विश्वभर नजिकबाट नियालिएको छ । अहिले इजरायलमा पनि कोभिडको उत्परिवर्तित रूप ‘ओमिक्रोन’ सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । मंगलबार ३७ हजारभन्दा बढी थप व्यक्ति कोभिडबाट सङ्क्रमित भएका रिपोर्ट सरकारले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २७, २०७८, २१:१०:००
शनिबार, माघ ८, २०७८ शनिबारका मुख्य समाचाहरु : कोरोना हटस्पट बन्दै उपत्यकादेखि आइतबार देशभरका अदालत बन्द रहनेसम्म
शनिबार, माघ ८, २०७८ गणेशमान स्मृति उद्यान निर्माणका लागि थप रु एक करोड सहयोग
शनिबार, माघ ८, २०७८ काठमाडौँमा तीन व्यक्ति मृत्त फेला
शनिबार, माघ ८, २०७८ उपत्यकामा यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू, कुनमा लाग्ने, कुनमा नलाग्ने ?
शुक्रबार, माघ ७, २०७८ शुक्रबारका मुख्य समाचार : चुनाव तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनदेखि खाडी र मलेसिया भ्रमणमा रोकसम्म
शुक्रबार, माघ ७, २०७८ सबै सवारी साधनमा लागू हुँदैन जोरबिजोर प्रणाली